Focus Beauty မှ ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ် တင်သွင်းဖြန့်ချီသော ?New Skiin All In One Tone Up Cream? သည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ FDA No. MN191023848 ဖြင့် စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်.
ကြည်ကြည်ပြောင်ပြောင် Glass Skin Look လေးလိုချင်ရင် ?New Skiin? တစ်ထုပ်ဆောင်ထားရင် ရပြီနော်. သင့်အရေပြားကို အပြည့်၀ဆုံး အာဟာရဖြည့်တင်းပေးပြီး ကြည်ကြည်ပြောင်ပြောင်လေးနဲ့ တစ်နေကုန်လုံး လှနေစေပါတယ်. ?New Skiin Cream သုံးလိုက်ရင် ... ?Day Cream မလိုတော့ဘူး. ?Primer မလိုတော့ဘူး. ?Night Cream မလိုတော့ဘူး. တစ်ထုပ်ထဲနဲ့ အကုန်အဆင်ပြေတယ်. ?New Skiin Cream? 5g တစ်ထုပ် ၃၅၀၀ ကျပ်.
?New Skiin? ရောင်းရင် ဘယ်တော့မှ ရောင်းမကောင်းတဲ့ရက်မရှိတာ ဘာကြောင့်လဲသိလား . . . ၁. ?New Skiin? ရဲ့ အရည်အသွေး သာလွန်မှု. ၀ယ်ပြီးသုံးစွဲတဲ့ Customer တိုင်းက စိတ်တိုင်းကျပြီး ထပ်၀ယ်လိုအား အရမ်း မြင့်ပါတယ်. ၂. တာ၀န်ယူမှု တာ၀န်ခံမှု ?New Skiin? ၀ယ်ယူသုံးစွဲပြီး ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးသွားတယ်ရယ်လို့ မရှိပါဘူး. ပေးရတဲ့ တန်ဖိုးထက် ပိုလွန်တဲ့ အရည်အသွေး. ၀န်ဆောင်မှု. အာမခံမှုတွေကိုပါ အပြည့်အ၀ ရရှိပါတယ်. ၃. လွယ်ကူ အဆင်ပြေမှု Skin Care ရတာ ပြောရတာ လွယ်သလောက် တကယ်လုပ်ရတဲ့အချိန်အခါ ရှုပ်ထွေးပါတယ်. ?New Skiin? နဲ့ဆိုရင်တော့ လွယ်ကူ အဆင်ပြေစွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး ထိရောက်မှုလည်းရှိ ဘေးလည်းကင်းပါတယ်. ဒီအချက်တွေ‌ကြောင့် ?New Skiin Agent? တိုင်း လက်မလည်အောင် ရောင်းချနေရတာပေါ့. တစ်နိုင်ငံလုံး သုံးစွဲမှုအား သိန်းဂဏာန်းအထိ ရှိနေတဲ့ ?New Skiin All In One Toneup Cream ? ?New Skiin Cream?5g တစ်ထုပ် ၃၅၀၀ ကျပ်.
အသားလှ အသားကြည်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ ?New Skiin Cream? တစ်ထုပ်ပဲလိုတယ်. သင့်အသားအရေကို အာဟာရလည်းဖြည့်တင်းပေးတယ်. Treatment လည်း ပေးတယ်. Glow & Glass Skin ကိုလည်း ရရှိလာစေတယ်. ?New Skiin? 5g တစ်ထုပ် ၃၅၀၀ ကျပ်.
?New Skiin Cream? လိမ်းပြီး ကိုယ့်အသားအရေကို စိတ်တိုင်းကျတယ်ဆိုရင် ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုလည်း ညွန်ပေးလိုက်ဦးနော်. Stay Home ကာလမှာ အားလုံး အတူတူလှကြမယ်. ?New Skiin Cream?5g တစ်ထုပ် ၃၅၀၀ ကျပ်.